Tsvagiridzo pamusika wepepa remabhuku ekodhi
Iyo Laptop Bag Maketi yakafundwa zvakawandisa nevanyori venyaya iyi vakatarisa zvakanyanya kune vatengesi mamiriro, kuwedzera dunhu, kutungamira zvikamu, kusimuka maitiro uye mikana yakakosha, uye zvimwe zvidzidzo zvakakosha. Chirevo chinoratidzira zvinhu zvine simba zvinowedzera ...
"Kufamba" kune zvakasiyana
Kune wese munhu, "kufamba" kune rimwe dudziro. Kune vana vasina hanya, kufamba vanokwanisa kudya chinonaka chakadyiwa naamai vakagara nerudo, uye vanogona kutamba vachifara neshamwari, ndizvo zvinonyanya kunakidza. Kwavari, zvinoreva kufamba kungava "kutamba" uye "kudya"! F ...
Maitiro ekuchengetedza sei pakutenga chikafu
Sevadzidzi vezvekudya, ini ndinonzwa mibvunzo yakawanda kubva kuvanhu nezve njodzi yegorosari muzvitoro zvechitoro uye kuti ungagare sei wakachengeteka uchitenga chikafu pakati pehosha. Heano mhinduro dzemimwe mibvunzo inowanzoitika. Zvamunobata pamasherufu ezvekudya hazvisi zvekunetseka pane kuti ndiani anofema ...